QEEXIDA NOOCYADA UGU FIICAN EE LO'DA - XOOLAHA
Noocyada ugu fiican ee lo'da: maxay yihiin?
Wakiilada lo'da ayaa muddo yar la qabsaday.
Guryaha tuulooyinka badankood waxaad arki kartaa dhowr sac, kuwaas oo aad u jecel yihiin milkiilayaashooda.
Ilaa hadda, in ka badan 1200 oo lo 'ah ayaa la diiwaan geliyey adduunka, laakiin waxaa ka mid ah kala duwanaanta caanaha, hilibka iyo caanaha, iyo xayawaanka hilibka.
Sannado badan, sacabka nuucyada badan ee caanka ah waxay maareyeen in ay ka takhalusaan tiro ka mid ah cilladaha.
Sidaa darteed, waa dhagaxyadaas, iyo saddexda meeloodba, hadda waa kuwa caanka ah.
Tixgeli iyaga u dhow.
Kudhaa "Akhrisku waa madax cadaan ah"
Caanahan tani waxay ka jirtey taniyo bilowgii qarnigii 20aad. Waxaa lagu xannibey xoolaha xoolaha ee Kazakhstan iyada oo la marsiinayo burooyinka Hereford ee lo'da.
Waxay u mahadcelineysaa tayada "waalidiin" oo ah qaansiir cad oo caan ah aad u adag oo si buuxda ugu caddeeyaan magacooda lo'da lo'da.
Tan iyo tan waa xoolaha lo'da, markaas dastuurka xayawaanku waa ku haboon yahay. Midabka ugu muhiimsan ee noocaan ah waa casaan, ka dibna qaybaha jidhka sida lugaha, buraashka dabada, madaxa, caloosha, iyo dewlap waa caddaan.
Jirka oo ah lo'da iyo qashinka caanahan ayaa leh qaab fuusto oo qaabaysan, cidhbiyayaashu aad ayay u cufan yihiin waxayna aad u adag yihiin.
Muruqyada waxaa lagu horumariyaa lafo adag oo adag. Lugaha waa gaaban, laakiin awood badan. Maqaarku waa mid aad u muuqda qaab dhismeedka, unugyada subcutaneous si fiican ayaa loo horumariyaa. xilliga kuleylaha, dhogorta lo'da waxay noqotaa mid gaaban, dhalaalaya qorraxda, iyo si habboon u taabashada.
Xilliga jiilaalka, madaxa maqaarka ayaa sii dheer, timaha wuxuu noqdaa mid dheer, mararka qaarkood si kedis ah.
Cows wuxuu heli karaa miisaan culus oo ah 540 - 580 kg, laakiin mararka qaar ayaa ku nool miisaanka ayaa gaari kara 800 kg.
Bulls ma heli karaan wax ka badan 950 kg. Waxqabadka sigaarka waa mid wanaagsan. Sanad hal mar, hal lo'du wuxuu soo saari karaa 1000 ilaa 1500 kg oo caano ah oo ka kooban walxo baruur oo ku dhawaad ​​4%.
Xayawaanka caddaanka ah ee cadaanka ah ayaa aad u sarreeya (90-96%). Haddii ay aad u fiicantahay dufanka, ka dib marka boqolkiiba hilibka laga soo qaado wadarta guud waa 60-65%.
Tani waxay ka mid tahay lo'da aan qabin cunto, si deg deg ah u la qabsada isbeddelka heerkulka, iyo sidoo kale xajmiga xawaareynta helitaanka miisaanka.
Haddii xayawaanka yaryar ay si xooggan u daalaan, markaa da'doodu tahay 15-18 bilood waxay gaari doonaan 450-470 kg miisaanka.
Maqaarka lo'da ee xayawaankan waxaa si firfircoon loo isticmaalaa warshadaha ku habboon si loo helo maqaar tayo sare leh. Iyadoo ay ugu wacan tahay horumarinta ku filnaanta musqulaha, hilibka lo'da ee caanahan waa mid kooban oo dufan leh, laakiin aad u casiir leh.
Tani waxay u muuqataa in ay tahay nooca ugu caansan ee xoolaha la korsado si loo soo saaro hilib. Midabka madow mugdiga ah ee lo'dooyinkan waa aasaas, laakiin qaybo ka mid ah jirka ayaa leh midab cad.
Qaansigan waa la duubay iyadoo loo eegayo ujeeddadoodii hilibkooda. Qaabka jidhka ee lo'da waa foormo-qaabeeya, laftiisa waa weyn, waxay u muuqataa in yar la yareeyo.
Fanku waxa uu si cad u iftiimay. Dhabarku waa dherer, dherer gaaban. Xabadku waa qoto dheer oo qoto dheer. Geesaha way gaaban yihiin laakiin way adag yihiin. Waxaa jira maqaarka maqaarka. Maqaarka laftiisa waa mid khafiif ah oo qallafsan.
Miisaanka qaangaarka qaangaarka ah wuxuu noqon karaa 850 kg ilaa 1 tan, iyo lo'da 550 ilaa 650 kg.
Buulka geedka waxaa inta badan lagula taliyaa in uu tago socod. Sidoo kale iyaga miisaan aad u dhaqso badan. Hilibka waa runtii "marble", tayo sare leh. Qiyaastii 60% miisaankii lo'da waa hilib.
Lo'da ee caan this waa mid aad u adag, uma baahna daryeel gaar ah, wuxuu difaacaa cudurrada xoolaha badankood, isla markaana si degdeg ah ugu habboon degaannada cusub ama xaaladaha cimilada.
Cows waa muddo dheer, maadaama ay ku noolaan karaan 15 illaa 18 sano, xaalad nololeedkuna dhan yahay waxaa lagu hayaa heer isku mid ah.
Astaanta Waxay aad u yihiin degan, kuma dhici karaan qof. Marka xoolo-baxdo Hereford, qadar lacageed oo weyn oo lacag ah ayaa lagu badbaadin karaa quudinta, tan iyo xayawaankani waxay cuni karaan waxyaabo dhir ah oo ku yaal berrinka, taas oo ah, xitaa haramaha iyo cawska ugu adag.
Maaddaama ay tahay lo'da lo'da ah, lo'da caleenta this lama gooyn karo, laakiin inta lagu jiro nuujinta lo'da waxay soo saari kartaa 1000 - 1200 kg oo caano ah oo leh dufanka 4%.
Xayawaanka Tani waxaa la dhigay waqti aad u dheer - bartamihii qarnigii 18aad. Ujeeddo xayawaankani waxay leeyihiin caalam, taas oo ah hilibka iyo caanaha.
Su'aalaha ugu muhiimsan waa casaan, laakiin kala duwanaanshuhu wuu ka duwanaan karaa. Mararka qaarkood waxaa jira lo'da leh maqaarka maqaarka. Qaybo ka mid ah jidhka ayaa leh midab cad.
Xayawaankaas, wax walba waa isku dhafan yihiin - iyo muruqyada sida fiican u horumarsan, iyo guud ahaan jirka. Jidhka lo'dooyinkani waa mid is dulfuulan, laakiin qiyaas ahaan.
Madaxa waa yar yahay, qoortuna waa gaaban yahay, dhabarkuna waxay sameeyaan xariiq toosan. Lugaha waa gaaban, waxay abuuraan taageero ku filan sababtoo ah habka meelaynta. Mararka qaarkood waxaad arki kartaa shakhsiyaadka cirridka jilicsan loo qaabeeyey sida digaaga, taas oo ka dhigaysa xayawaankan inay nugul yihiin.
Maqaarku waa mid jilicsan, oo daboolaya. Cuncunku waa wareegsan ama koobbi-qaabeeya, dhejisyada si fiican ayaa loo muujiyey, miisaanka guud ee candho xoolo waa weyn yahay. Biraha si sax ah ayaa loo dhigayaa.
Sida miisaanka, burooyinka waxay heli karaan ilaa 1 ton oo culeyska jirka ah, halka lo'du aaney culeysin, celcelis ahaan 500 - 530 kg.
Caanaha, lo'duna waxay bixiyaan wax badan, celcelis ahaan 3000 - 5000 kg sanadkiiba oo leh baruur daro ilaa 4%. Marka la gawraco 60% miisaanku wuxuu ku dhacaa hilibka.
Lo'da Bestuzhev waxay leedahay dulqaad heer sare ah uma baahnid daryeel gaar ahXilliga jiilaalka, waxaa lagu quudin karaa xayawaan, mana saameynayaan liiska cudurrada. Cadaadiska kudhaca kansarka iyo tiibishada waa dhaxaltooyo.
Lo'da caanaha ah ayaa la jaraa si loo helo hilibka iyo caanaha labadaba. Wadanka xayawaankani waa Switzerland.
Qeybta ugu muhiimsan ee jilicsanaanta calaamadaha ayaa ah caleen ama caleemo madow, laakiin sidoo kale waxaa jira shakhsiyado casaan ah oo casaan ah ama casaan cad iyo madax cad. Haddii xayawaanka la nadiifiyo, sanka, hooves iyo geesuhu waxay noqon doonaan caddaan ama casaan.
Jidhka ka mid ah lo'da ayaa lagu xiraa si adag oo u dhigma. Madaxiisu waa mid ballaadhan oo aan muuqan, muuqaal ballaaran. Xabaduhu way qoto dheer yihiin, lafaha way xoog badan yihiin, dhabarkuna waa ballaaran yahay.
Muruqyada xayawaanka buuggan ayaa si fiican u koraya. Caanahaasi waa dhumuc dufan leh, oo leh miisaan wareeg ah oo miisaan weyn leh iyo ibta ba'an ama cylindrical waaweyn. Miisaannada waxay yihiin aad u badanTusaale ahaan, culeyska lo'da wuxuu u eg yahay 620 kg, boorashuna waxay cuni karaan ilaa 1 tan.
Iyada oo hilib shimbir leh ay noqon doonto tayo aad u sareysa. Sababtoo ah horumarinta wanaagsan ee muruqyada ee hilibka ku jira wax ka badan 12% dufanka. Sida soosaarka caanaha, tilmaamayaashu waxay ku xiran yihiin aagagga cimilada ah ee lo'da la kiciyo.
Cimilada cimilada, lo'da ayaa siin doonta ugu badan ee caanaha suurtogalka ah - 4000-5000 kg.
Xayawaankani waa kuwo aad u jilicsan, degan, firfircoon, iyo waliba aysan saameyn cuduro badan.
Faa'iidada ugu weyn ee lo'da Simmental waa kobaca firfircoon ee murqaha, taas oo ay ku mahadsantahay taas oo hilibka aan ahayn dufan. Laakiin qaar ka mid ah xayawaanka ayaa laga yaabaa inay ku tilmaameen khasaare ka mid ah caanahan. Tusaale ahaan, waxaa jira lo'da taas oo lugaha qaldan, dib u dhig ama dib-u-kiciyeyn horudhac ah ee candho xoolo.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan dabeecadaha ugu fiican ee lo'da ee jihada hilibka.
Dhalashadaani waxay u muuqatay mid dhowaan ah waxaana ay leedahay asal raashin ah. Saldhigga noocaan ah waxaa ka mid ah wakiillo aad u qiimo badan oo noocyada xayawaanka ah - sharolis, lo'da Aberdeen-Angus iyo lo'da. Tani waxay ku timid xulasho taxaddar leh, sababtoo ah waxay suurtagal u aheyd inay u keento sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee heerarka caalamiga ah.
Badanaa, lo'da gebi ahaanba maya geeso, kuwaas oo 70% lo'du ay yihiin komole. Midabka ugu muhiimsan ee xayawaankani waa cawl cad.
Dhismaha waa xoog xoog leh, foosto foosto ah. Xilliga jiilaalka, xayawaanku waxay ku baxaan timo qaro weyn, oo ka hortagaya xayawaanka xad dhaafka ah ee xayawaanka. Sababtoo ah tan, tarankan waxaa lagu qiimeeyaa gobollada waqooyi, halkaas oo xilliga jiilaalka heerkulku aad u badan yahay, laakiin sacadu ma dhumi doonto miisaan badan.
Horumarka xayawaanka auliekol wuxuu ku dhacaa xawaareyn degdeg ah. Buundooyinku waxay miisaamaan in ka badan 1 tan, oo sacadu waxay heli karaan celcelis ahaan 550 kg oo miisaankeedu yahay. Sababtoo ah horumarinta muruqyada wanaagsan hilibka lo'da ayaa ku yar kalooriyeyaashaTayo wanaagsan. Qiyaastii 60% miisaanka guud ee lo'da waa hilib marmar ah.
Awoodda la qabsiga xayawaankan ayaa ah mid aad u wanaagsan. Waxay si fudud ugu noolaan karaan cimilada xun.
Muuqaal ah noocyada kala duwan ee lo'da waa Dhismaha maqaarka ma ahan 2 - 3 lakor, laakiin 4 - 5. Si aad u quudiso xayawaanka aan qabyo ahayn, cun cun ku dhawaad ​​cawska. Aad u jecel yahay socodka, iyo sidoo kale uma baahnid shuruudo gaar ah oo ku saabsan daryeelka iyo dayactirka.
Laga soo bilaabo "Red Steppe"
Jihada ugu muhiimsan ee lo'da ee caanaha this waa caanaha, laakiin waxaa jira sidoo kale lo'da iyo dibi, kuwaas oo u muuqaal ah in lagu gowraco hilibka iyo heli dhalidda si cagaaran wanaagsan.
Tan iyo markii midabada ugu weyn ee caanaha this ee lo'da waa casaan, magaca xayawaankan ayaa la siiyaa. Mararka qaarkood midabka ayaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay, laakiin waxay u kala baxdaa buluug fudud ilaa guduud mugdi ah. Caloosha iyo lugaha ayaa ah mid cad. Dumarka, dhabarka iyo qanjiradu waxay noqon karaan madow.
"Milkeness" ee lo'dadan waxaa lagu magacaabaa muuqaalka. Laf-dhabarta iyaga ayaa ah iftiin, dharkana waa dherer iyo wax yar. Madaxa waa yar yahay, qoortu waa dhuuban tahayna way dheer tahay, waxaad ku arki kartaa lakabyo badan. Qafis feedhku waa cidhiidhi, laakiin isla markaa, qoto dheer.
Chest ku dhowaad aan la horumarin. Dareerku waa mid dhexdhexaad ah, dheer, masaaro ayaa mararka qaarkood la kiciyaa. Caloolku waa mid cufan, laakiin muruqyada gidaarka caloosha waa xoog badan yihiin, sidaas darteed lafdhabarta lafteeda lafteedu maaha. Lugaha toosan oo xooggan. Cunnadu waa wareegsan, si fiican loo horumariyey, dhexdhexaad ah mugga, ferruginous.
Waxaa jira shakhsiyaadka leh candho xoolo aan caadi ahayn, kuwaas oo shaygooda aan si caddaalad ah loo horumarin, ama qaabka caanaha laftiisu waa qalad.
Xayawaanka cagaarka ah ayaa loo adeegsadaa wax kasta oo aad u dhaqso badan, xitaa cimilada xun. Xayawaanno iyo abaarba lama kulmaan xayawaankaas. Socodyada socdaalada iyaga Aad waxtar u lehmaadaama ay cuni karaan wax yar oo geedo ah.
Dibeddu waa ay burburin kartaa laabta cidhiidhiga ama dhumucda si aan habooneyn.
Muruqyada qaansiirka gaduudka cas ee lihi waa ay liidataa, sidoo kale miisaankoodu ma badna karo. Haddii lo'da ay ka badan tahay saddex jeer, markaa miisaankiisu waa kala duwan yahay inta u dhexeysa 450 iyo 510 kg.
Dumarka, kuwaas oo loo isticmaalo dhaaminta, ayaa inta badan si gaar ah u daalaan, miisaankoodu wuxuu noqon karaa 800-900 kg. Waxyaalaha caanaha ee caanaha buuggani waa 3500-4000 kg oo caano ah 4% dufan.
Breed "Brown Schwyzka"
Xayawaankan waxaa lagu soo wareejiyay Switzerland qarnigii 14aad. Caanaha ayaa aasaas u ah noocyo badan oo kale oo hadda ah kuwo aad u caan ah xoola-dhaqatada.
Cawska caanahan ayaa badanaaba midabkiisu waa midabyo, laakiin hoosku wuu ka duwan yahay - labadaba iftiin iyo madow. Gubashada, qaybta hore ee jidhka waa madow.
Naftooda ayay xayawaankoodu badan yihiin, xoog badan. Jidhku waa muddo dheer. In kasta oo xaqiiqda ah in madaxa uu yaryahay, wejigiisu waa ballaadhan yahay, geesahuna waa muddo dheer oo mugdi ah. Qoorta waa yar yahay.
Xabadku waa mid caan ah, oo si qoto dheer loo beeray, qashin-qubka ayaa si fiican loo horumariyay, dhabarka ayaa ka dhigaya xariiq toosan. Udder yar yar, wareega ama koob-qaabeeya. Lafo adag. Lugaha yar yar, laakiin xoog badan, si sax ah u dhig.
Muruqyada ayaa si fudud loo horumariyaa. Qaab dhismeedka maqaarku waa mid cufan, laakiin dhuuban iyo cufan, dhumuc, googo gaaban ayaa ku jirta dhammaan jirka.
Kabaha qaangaarka ah ayaa miisaamaya ilaa 800 kg, iyo dibi - ilaa 1 tan. Cuntada hilibka ayaa ku dhawaad ​​60%. Tayada hilibka waa mid aad u fiican. Cuntada celceliska caanuhu waa 3500-5000 kg oo caano ah, laakiin mararka qaarkood xitaa 10,000 kg oo caano ah ayaa laga cabi karaa lo'da, iyo boqolkiiba baruurta ayaa sarreeya (3.8 - 4%).
Caafimaadka ee ku yaal Schwyz waa mid aad u fiican, xoog badan. Waxay si dhaqso ah u horumariyaan. Waxay si fudud u dhalaan, iyo da'da qaansarradu waxay ahaanayaan mid la mid ah. Mowqifka lo'da waa degan yahay, waxay u nugul yahiin inay si deg deg ah u helaan.
Laakiin sidoo kale lo'da Swiss waa ku filan goos goosta cuntada. Waxay u baahan yihiin in la siiyo xaalado fiican. Waxay sidoo kale siiyaan caano si tartiib ah, marmarka qaarkoodna lagama maarmaan karo mashiinka, sida xayawaanka qaar ka mid ah ibta naaska ayaa si qaldan loo dhigay.
Dhammaan noocyada lo'da waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda, laakiin haddii aad diyaar u tahay inaad tan la gasho, markaa doorashadu waa adiga. Nasiib wacan
Sidee loo abaabulaa socodka digaagga? Waxa la dooranayo - aviary, solarium la qaadi karo ama qalin bilaash ah?
Sidee si habboon u bedeleysaa Kalanchoe guriga
Yemalina "Tiberri": sifooyinka noocyada kala duwan iyo beerista agrotechnology
Qalabka daawooyinka ee guryaha xayawaanka Agave
Cudurka fayraska halista ah - leukemia ee shimbiraha
Ludysia waa warshad xiiso leh oo matnaata Orchids genus. Ciriiri ee ubaxyo yar yar, kuwaas oo u eg luul oo muuqaal ah. Caleemaha waaweyn waxaa ku jira qaabab qurux badan oo la mid ah labiska. Dhaqanka daryeelka ayaa dalbanaya, laakiin wax cusub ma jiraan. Waxaad u baahan tahay inaad la socoto waraabinta, dooro meesha saxda ah iyo daaweynta ka hortagga daawooyinka cayayaanka ah, iyo sidoo kale cudurada. Read More
Ariga Okota: waxa la sameeyo, gaar ahaan daryeelka carruurta
Sida loo sameeyo qafis loogu talagalay marin-madow oo lagu qurxiyo gacmahaaga